हाईट (उचाई) नबढेर तनावमा हुनुहुन्छ, आजै अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपाए ! – Ekathmandunepal
Homeभिडियोहाईट (उचाई) नबढेर तनावमा हुनुहुन्छ, आजै अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपाए !
२७ मंसिर २०७४, बुधबार १६:५५ ekathmandu Nepal भिडियो 0
एजेन्सी – कुअनी पनि मानिसको पर्सनालिटी राम्रो देखाउनको लागि हाईट अर्थात् उचाईको महत्वपूर्ण हात रहन्छ। तर कसैको बच्चादेखि नै हाईट राम्रो हुन्छ त कसैको हाइट सानो हुनुले धेरै कुरामा समस्या परिरहेको हुन्छ।
जस्तै आफु भन्दा कम उमेरकाले व्यक्तिले भाई भन्ने ठूलो या आफ्नो उमेरको साथीभाईहरु सँग बस्दा सानो कदले गर्दा बच्चा देखिएको महसुस गर्दै हिनताबोध हुने गर्छ। उचाई सानो हुनु बिशेषगरी जेनेटिक ( वंशाणुगत) समस्या हो। यति तपाईको घरमा कुनै सदस्यको उचाई सानो छ भने तपाईको पनि उचाइ सानो हुने सम्भावना हुन्छ। तर कुनै अवस्थामा पौष्टिक तत्वको संयोजन नमिल्दा पनि उचाई कम हुन सक्छ।
त्यसैले आज आज तपाइँलाई हाईट बढाउने सरल घरेलु उपाए बताउन गैरहेका छौं। यदि तपाईले तल दिईएको उपाएहरुलाई सहि तरिकाले प्रायो गर्नुभयो भने तपाईको हाईट अवस्य बढ्नेछ।
समरण रहोस, हाईट बढाउने यो तरिका/उपाए ३५ वर्षसम्मका व्यक्तिहरुले अपनाउन सकिन्छ। किनकी, यो उमेरअवधि पछी हाईट बढाउन सम्भव छैन।
-बिगुल न्युज बाट
– आयोर्वेद सम्बन्धि इन्टरनेटमा प्राप्त जानकारीहरुबाट
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (90)
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (66)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (20)
स्तन र योनी कत्रो हुनुपर्छ ? (16)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (13)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (12)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (12)
म बाहिर हेर्दा खुसि छु तर मिठो सेक्स कहिले भएन- के… (12)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,364)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,374)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,201)
“भाउजु, कति दिन तड्पेर बस्नुहुन्छ ? आज म तपाईंको… (1,952)